पूजा शर्माका ‘प्यारा’ बन्दै माग्ने बुढा ! « Ramailo छ
पूजा शर्माका ‘प्यारा’ बन्दै माग्ने बुढा !
प्रकाशित मिति : Jul 9, 2018
समय : 1:19 pm
माग्ने बुढा उर्फ कलाकार केदार घिमिरेले ‘छक्का पञ्जा’ समुह भन्दा बाहिर रहेर फिल्म ‘रामकहानी’मा अभिनय गरेका छन् । सुदर्शन थापाको निर्देशन रहेको यस फिल्ममा केदारले महंगो पारिश्रमिक दश लाख लिएका छन् । महंगा कलाकारको फिल्ममा भूमिका चाहिं कस्तो होला त ? भदौ २२ सम्म प्रतिक्षा गरौं ।
रिलमा भूमिका जे जस्तो भएपनि रियलमा भने माग्ने बुढाको ‘रामकहानी’की सोलो नायिका पूजा शर्मासँग दोस्ती जमेको छ । प्रि प्रोडक्सनदेखि सुरु भएको केदार र पूजाको दोस्तीयारी छायाँकन सकिंदासम्म निकै गाढा भएको देखिन्छ । पूजाकै आग्रहमा केदारले सेटमा खसी समेत काटेर खुवाएका थिए । सुटिंगसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि केदार र पूजा निकै नजिक देखिन्छन् । रमाइलो छ को पहिलो एनिभर्सरीमा पनि पूजा र केदारको निकटता निकै राम्रो देखियो ।
सुदर्शन र पूजा मिलेर बनाएको ‘रामकहानी’मा केदार र पूजासँगै नायक आकाश श्रेठ, कलाकारहरु जितु नेपाल, विल्सन विक्रम राई, रविन्द्र झा लगायतको अभिनय छ । संगीत अर्जुन पोखरेलले दिएका छन् । फिल्मको यतिबेला पोष्ट प्रोडक्सनको कार्य भैरहेको छ